HVAC FAQ - Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Yini Energy yokutakula mpilo?
ukupholisa Energy yokuthola (ERV) iyona energy inqubo nokuvulwa ukushintshisana amandla equkethwe isakhiwo evamile ukhathele noma isikhala emoyeni nokulisebenzisa ukwelapha (umbandela) engenayo ongaphandle ukupholisa umoya e zokuhlala kanye commercial HVAC izinhlelo. Phakathi zonyaka ezifudumele, ohlelweni i-ayaphola bese dehumidifies ngenkathi humidifying futhi pre-Ukushisa ezinkathini zonyaka ezipholile. Inzuzo yokusebenzisa amandla wokutakula ikhono ukuhlangabezana ASHRAE ukupholisa & amandla amazinga, ngakolunye uhlangothi luthuthukisa izinga lomoya onempilo endlini kanye nokunciphisa inani imishini HVAC umthamo.
Ngelilodwa nje, Energy yokutakula mpilo (ERV) uvumela umoya omusha ungene isakhiwo, kuyilapho esaziwa Ukushisa pre-moya noma ukupholisa.
Iyini incazelo imodeli?
Ukushisa & Energy yokutakula Ventilators
Qaphela: Ukufakwa uhlobo
uhlobo Kumisiwe, L-Floor uhlobo
XHBQ-D10TH libhekisela okwesikhashana uhlobo ERV nge Imininingwane ukushisa, TH chungechunge, emoyeni fl ow ka 1000m3 / h, 3 ngesivinini.
Indlela ukhethe Ahu?
Holtop Ahu zenzelwe futhi ekhethiwe ngokuvumelana isofthiwe professional, ukuhlinzeka abasebenzisi nge ezinengqondo, kwezomnotho, kanye nama-practical air conditioning izixazululo. Izici Holtop Ahu isofthiwe Ukukhetha futhi zihlanganisa:
Sound yephrojekthi Ahu nombuzo ukuphathwa
Ukuhamba eqondile futhi iyunithi kwesigaba ukwahlukana
Multiple ongakhetha ukushisa yokutakula futhi functional kwesigaba inhlanganisela
Isimo emoyeni iphuzu ekubalweni izigaba eziyinhloko
izingxenye ezihlukahlukene ongakukhetha
l Nezimo iyunithi inhlanganisela
l Professional futhi Ukukhetha eziningiliziwe ibika okukhipha
Ingabe Ukunikeza Ahu Design Izikhungo?
Ukwakha iphrojekthi yakho usebenzisa Holtop Air Ukuphathwa Amayunithi
Holtop AHUs zisekelwe umklamo Modular ngokuphelele, uyakwazi yokuvumelana izidingo ezihlukahlukene ukufakwa izinhlobo, futhi lakhiwa benaka ekhethekile ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Sicela unikeze imininingwane iphrojekthi yakho kanye nezidingo kakhulu ngendlela ungakwazi ukuze senze isiphakamiso ngawe ngokushesha ngangokunokwenzeka.